Exchange zvazvingava US dhora (USD) Kuti Euro (EUR) kugara Forex Exchange musika
Forex Exchange updated: 29/06/2022 21:35
US dhora kuna Euro mutengo izvozvi pamusoro Forex Exchange pamusika pane 29 Chikumi 2022
21:35:27 (Forex zvazvingava update muna 59 seconds)
Kunobva masero ekutsinhana ndeye Forex kuchinjana. Forex: US dhora kusvika ku Euro mwero wekutsinhana - 0.96. Tarisa US dhora chiyero ikozvino pamhepo. Nguva yekutsanya ye US dhora kusvika ku Euro chiyero.
Forex wokutengesera chati Euro kuna Dollar kurarama panguva 29 Chikumi 2022
Forex wokutengesera chati US dhora Kuti Euro kurarama, 29 Chikumi 2022
Chati ye US dhora kusvika Euro chiyero chekutsinhana pa 29 Chikumi 2022 inoratidzwa pawebsite yedu. Shanduko pamwero wekutsinhana dzinoonekwa pakarepo pane chati. Shandisa mbeva kusarudza iyo chaiyo nguva pane chati uye tsvaga iyo US dhora mwero wekutsinhana pane Forex panguva ino. Iyo US dhora chiyero chekutsinhana chinogadziriswa pakarepo.
Pindura US dhora Kuti Euro US dhora Kuti Euro Exchange zvazvingava US dhora Kuti Euro Gengi nhoroondo
Online zvokutengeserana US dhora (USD) kuti Euro pari zvino
Wedzero rate nhoroondo maminetsi ese. -0.0000 EUR - shanduko mu US dhora (USD) kusvika Euro chiyero cheminiti iyi. Nhoroondo yemari yekutsinhana mumaminetsi ekupedzisira inoratidzwa mune tafura. Ona data rekutsinhana kwemaminetsi gumi petafura pane ino peji.
Online zvokutengeserana US dhora (USD) kuti Euro yokupedzisira awa wokutengesera
Kuchinjana rate nhoroondo kwese awa. Simba reiyo re US dhora (USD) ku Euro panguva ino ndiyo - 0.0002 EUR. Nhoroondo yeawa gumi ye US dhora kusvika ku Euro kubva ku Forex mune tafura pane peji. Iko kukosha kwe US dhora paawa yakaiswa patafura kuitira kuti zvive nyore kuona mutsauko.
Online zvokutengeserana US dhora (USD) kuti Euro yanhasi kuitika 29 Chikumi 2022
21:35 20:35 19:35 18:35 17:35 16:35 15:35 14:35 13:34 12:34